Star Wars ရူပဗေဒ : ‘Force’ ဆိုတာ တကယ်ရှိနိုင်သလား – Curiosity
Home /Star Wars ရူပဗေဒ : ‘Force’ ဆိုတာ တကယ်ရှိနိုင်သလား
Physical Science,Science News,Space |
သိပ္ပံကို စိတ်ဝင်စားကြသူအများအပြား၊ nerd များနဲ့ geek အားလုံးလိုလို Star Wars ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝန်ခံလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ကိုယ်တည်းရှိနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ တစ်ခါတော့ အဝေးက ပစ္စည်းတစ်ခုကို Force အသုံးပြုပြီး ရွေ့အောင် လုပ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားဖူးတယ်မလား။
ဒီ Force ဆိုတာမျိုး အပြင်မှာ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်မလား။ ပစ္စည်းများကို အဝေးကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်မလား။ Force ကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားနိုင်မလား။ Jedi များ တကယ်ရှိနိုင်မလား။
Star Wars ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပွဲဦးထွက် ရုပ်ရှင်မှာ Obi Wan က အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သူ Luke Skywalker ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “Force surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။ ဒါဟာ သိပ္ပံပညာရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ထိ မှန်ကန်နိုင်ပါသလား။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကြီးအတွင်း အား ၄ မျိုး ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားကြပါပြီ။ သူတို့ကတော့ အပြင်းစား နဲ့ အပျော့စား နျူကလိယားအား၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်နဲ့ ဆွဲငင်အားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကနှစ်ခုကိုတော့ မြင်သာအောင် အထူးတလည်ရှင်းပြစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ အပြင်းစား နျူကလိယားအားဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ နေမင်းကြီးထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ nuclear reactions များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အားကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အပျော့စား နျူကလိယားအားဆိုတာကတော့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအားများအားလုံးဟာ စကြဝဠာအနှံ့တည်ရှိပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အပေါ်မှာ သက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Obi Wan ရဲ့ စကားဟာ သိပ္ပံရှုထောင့်ဘက်က ကြည့်ရင်လဲ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ပြောရမယ့် Force ဆိုတာဟာ ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူး။ Jedi များအသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းများ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ရွှေ့နိုင်ခြင်း၊ စိတ်ချင်းဆက်ပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်နိုင်မလား။ ဒီအရာအတွက် လက်တွေ့ ရူပဗေဒက ဘာပြောသလဲ။
အိုင်းစတိုင်းရဲ့ နှိုင်းရသီအိုရီဟာ စကြဝဠာအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အရာများအားလုံး ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် အလျင်၊ သွားနိုင်မယ့် အလျင်ကို ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဘယ်အရာမှ အလင်းရဲ့ အလျင်ကို မမီနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဟာ မြန်မြန်သွားလာလေလေ သူ့ရဲ့ ဒြပ်ထုဟာ များလာလေလေဖြစ်ပြီးတော့ အလင်းအလျင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ဒြပ်ထုဟာ အနန္တဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ Star Wars ရုပ်ရှင်ထဲကလို Alderaan မြို့တော်ကြီး Imperial Army ရဲ့ တိုက်ခိုက်တာကို ခံရတော့မယ်ဆိုတာကို Force နဲ့ ချက်ချင်းတန်းပြီး သတိပေးလိုက်လို့မရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလင်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်တစ်ခုခု သွားနိုင်တဲ့ အလျင်ဟာ အလင်းထက် မပိုနိုင်လို့ပါပဲ။
Alderaan မြို့ကြီးကို Death Star က ဖျက်စီးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Obi Wan က ချက်ချင်းဆိုသလို Disturbance in the Force ကို ခံစားနိုင်ပါ့မလား။
တကယ်တော့ ဖြစ်နိုင်နေပြန်ပါတယ်။ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ နှိုင်းရသီအိုရီကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ အခြားသီအိုရီတစ်ခုလဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ သူကတော့ ကွမ်တမ်သီအိုရီပါပဲ။
အခုလို အကွာအဝေးကြီးလှတဲ့ နေရာနှစ်ခုကြားမှာ အချက်အလက်များ သယ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို ကွမ်တမ်သီအိုရီက ဘာပြောထားသလဲ။ အိုင်စတိုင်းရဲ့ နှိုင်းရသီအိုရီအရတော့ ဘယ်အရာမှ အလင်းထက် မမြန်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွမ်တမ်ရဲ့ လှည့်ကွက်အောက်မှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်နေပါတယ်။
အမှုန်နှစ်ခုကို နည်းပညာထူးတစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို နေရာခွဲလိုက်မယ်။ ပြီးရင် သူတို့ကြားက ဆက်နွယ်မှုကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ကြမယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို Quantum Entanglement လို့ ခေါ်ပါတယ်။ (ဒီနေရာကစပြီး သူ့ကို ကျွန်တော် QE လို့ အတိုရေးသွားပါမယ်။) ဒီ QE နည်းနဲ့ဆိုရင် အချက်အလက်များဟာ အလင်းထက် မြန်တဲ့ နှုန်းနဲ့ သွားနိုင်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ အလင်းရဲ့ အမှုန်ဖြစ်တဲ့ ဖိုတွန်နှစ်ခုကို QE အနေနဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုခွာပြီးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ သူတို့ဟာ အချင်းချင်း သက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမှုန်တစ်ခုရဲ့ အခြေအနေကို တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင် အခြား အဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ အမှုန်ရဲ့ အခြေအနေကိုလဲ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဘယ်လောက် အကွာအဝေးမှာ ရှိနေရှိနေ အရေးမကြီးပါဘူး။
အိုင်းစတိုင်းက ဒီ အိုင်ဒီယာ (သီအိုရီ) ကို သဘောမကျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်မခံတာလဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူကဒါကို “spooky action atadistance” ဆိုပြီးတော့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဆိုဆို မော်ဒန်ရူပဗေဒရဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေအရ ဒီ QE ဟာ မှန်ကန်နေပြီး အမှုန်များဟာ အကွာအဝေးဘယ်လောက်ရှိရှိ သူတို့ကို ဆက်နွယ်နေအောင် လုပ်လို့ရနေပါတယ်။
တကယ်တော့ George Lucas ဟာလဲ သူ Star Wars ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို စရေးတုန်းက ဒီ ကွမ်တမ်သီအိုရီရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။ ၁၉၆၀ နဲ့ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များမှာ သိပ္ပံဆရာတို့က ဒီ QE ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို Force လို့ သုံးနှုန်းခဲ့ကြပါတယ်။ လူးကပ်စ်ကလဲ ဒီမှာ အတွေးပေါက်သွားပုံရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူက Force binds us together ဆိုပြီး အတွေးအပေါ်သွားပုံပါပဲ။
မော်ဒန်ရူပဗေဒရဲ့ စမ်းသပ်ချက်များအရ ခုနက QE စမ်းသပ်ချက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ စောင့်ကြည့်သူအတွက်လဲ entanglement ဖြစ်နိုင်သေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Force က bind လုပ်ထားတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမယ့် အချက်က QE ဟာ အမှုန်များမှာသာ ဖြစ်နိုင်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဘဝက ပစ္စည်းများမှာ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာပါပဲ။
နောက်ပိုင်းမှာ မော်ဒန်ရူပဗေဒပညာရှင်များရဲ့ တွက်ချက်မှုများအရ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ အမှုန်များကိုပေါင်းစပ်ပြီး QE စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်လဲ သူတို့ကြားမှာ ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ entanglement ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး superconductivity ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင် သိရပါတယ်။
သံလိုက်ဓာတ်တစ်ခုအပေါ်မှာ superconductor တစ်ခုက ဝဲနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို Meissner Effect လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာလဲ QE ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ဖြစ်ရတာပဲလို့ ပြောနိုင်ပြီး သူတို့ကြားက Force ဟာ strong ဖြစ်နေပါတယ်။ The force is strong with Meissner Effect.
Star Wars ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါတဲ့ Force ဟာ ဒီသိပ္ပံပညာကပြောတဲ့ Force နဲ့ ကွဲပြားမှုရှိနေသေးပါတယ်။ ဒါကတော့ သက်ရှိများမှာကော QE ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
QE ဟာ ခေတ်သစ်ရူပဗေဒအတွက် အရေးပါတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ matter နဲ့ energy ကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လဲ ကြီးမားတဲ့ အရာများမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ့် QE ကို တိုင်းတာဖို့ ခက်ခဲပြီးတော့ သက်ရှိများမှာဆိုရင် ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ရူပဗေဒပညာရှင်များဟာ သက်ရှိများမှာ ရှိတဲ့ ကွမ်တမ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုလဲ လေ့လာနေပြီ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဘာသာရပ်ကို Quantum Biology လို့လဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ biomolecules အဖွဲ့အစည်းများမှာလဲ QE ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ခပ်ရေးရေး ထောက်လှမ်းမိထားပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် သက်ရှိများမှာလဲ QE ရှိနေဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Jedi များ တတ်စွမ်းသလို ပစ္စည်းများ၊ စိတ်များကို ကျွန်တော်တို့ Force ကိုအသုံးပြုပြီး ရွေ့လျားဆက်သွယ်နိုင်မလား။ Han Solo ပြောသလို Never tell me the Odds လို့ပဲပြန်ပြောပြီး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဆက်လက်လေ့လာသွားချင်ပါတယ်။
စကြဝဠာစတင်မှုအတွက် မဟာပေါက်ကွဲမှု သီအိုရီကလွဲလို့ အခြားမရှိသေးပါ
TAGS: Articles astronomy explanation facts Physical Science science space tharhtetaung